Il-76 qiimaha (gyro, dhererka iwm.) Ma muuqan.
Il-76 qiimaha (gyro, dhererka iwm.) Ma muuqan. 11 bilood 1 toddobaad ka hor #1446
Hagaag, Waan ka soo degsaday Il-76 halkan, waxayna u egtahay mid fiican, laakiin cabirrada kama muuqdaan, bedelkeeda waa guddi ka dambeeya cabirka. Marka kaliya waa guddi cagaaran oo leh xargaha banaanka, waana heystaa fsx uumi. Qof ma garanayaa wixii loo hagaajin lahaa tan?
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.142